Fitbit dia nanemotra ny fandefasana ny smartwatch vaovao farafaharatsiny hatramin'ny faran'ny 2017 | Androidsis
Fitbit dia miasa amin'ny fampandrosoana ankehitriny ny famantaranandro voalohany "tena izy"Saingy araka ny tatitra vaovao, dia toa nisedra olana maro ny orinasa nandritra ny fizotran'ny fampandrosoana gadget, izay nahatonga azy io hanemotra ny fandefasana izay nokasainy tamin'ity lohataona ity tamin'ny fararanon'ny 2017.
Araka ny notaterin'ny Yahoo Finance, ny ekipa tompon'andraikitra amin'ny smartwatch vaovao ho an'ny Fitbit dia vao tsy ela akory izay olana amin'ny GPS nanakana azy tsy hiasa tsara amin'ny alàlan'ny fananana ny antena amin'ny toerana tsy mety. Ho fanampin'izay, manana ihany koa ny ekipa fahasarotana amin'ny fanaovana ny famantaranandro ho mateza tanteraka ary mety ho debut mihitsy aza raha tsy misy an'io endri-javatra io raha tsy mahita vahaolana amin'ny farany izy ireo.
Tsara ny manamarika fa ny Fitbit dia mbola tsy nanandrana mafy loatra hanao izay azo anaovana ny fitafiany. Na ny Charge 2 aza, ny fanaraha-maso tena ilaina indrindra, dia tsy mitondra an'io endri-javatra io, na dia miaro amin'ny rano aza ny Flex 2 ary azo alentika any amin'ny 50 metatra.
Ao anatin'io tatitra io ihany, Yahoo dia nanondro fa ny smartwatch Fitbit vaovao dia hanasongadina a vatana aluminium ary fisehoana loko misy famirapiratana hatramin'ny 1000 nits, mitovy amin'ny Apple Watch Series 2, miaraka amina endrika noforonina avy amin'ny mpikaroka blaze Fitness.
Ao anatiny no hipetrahan'ilay fitaovana a tahan'ny fo, sensor GPS ary modely NFC, ary koa ny fifandraisana WiFi sy ny fanohanana amin'ny fitehirizana sy fitendrena mozika avy amin'ny serivisy Pandora.
Saingy angamba ny honohono malaza indrindra momba ny famantaranandro amin'ny ho avy dia misy ifandraisany amin'ny batterie-ny, satria mety hireharehany izany mizaka tena hatramin'ny 4 andro amin'ny fiampangana tokana, betsaka noho ny famantaranandro marani-tsaina hafa misy eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Raha ny vidiny, toa ny smartwatch vaovao an'i Fitbit dia tokony ho 300 dolara.
Ary farany, afaka namoaka roa ny orinasa headphone tsy misy tariby miaraka amin'ny smartwatch vaovao, na dia amin'izao fotoana izao aza tsy misy antsipiriany fantatra momba azy ireo.
Tao anatin'izay volana lasa izay, Fitbit dia nandray anjara tamin'ny fividianana mpanamboatra smartwatch maromaro. Desambra lasa teo, Nahazo Pebble ilay orinasa, raha ny volana manaraka kosa dia nanambara ny fividianana Vector Watch.
Fotoana fohy taorian'ireto fividianana roa ireto dia nilaza i Fitbit fa nametraka 6% ny mpiasa ao aminy taorian'ny nanoratany varotra vitsy noho ny nandrasana tamin'ny telovolana fahefatra 2016. Ny antenainay fotsiny dia ny fahombiazan'ny orinasa amin'ny smartwatch ho avy, tsena iray izay dia efa feno olona ary misy izany tolotra tena mahaliana amin'izao fotoana izao.
Mihevitra ve ianao fa mety manana fifaninanana hifaninana amin'ireo gadget Android Wear 2.0 hafa i Fitbit izay kasaina ho tonga amin'ity taona ity na efa misy?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Fitbit dia nanemotra ny fandefasana ny smartwatch vaovao mandra-pahatongan'ny fararano 2017 farafaharatsiny
Manomana ny famoahana ny Moto C sy Moto C Plus i Motorola